I-Gibson 's Warehouse No. 2 Ukubheka iDolobha!! - I-Airbnb
I-Gibson 's Warehouse No. 2 Ukubheka iDolobha!!
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Jeff
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi kuka-15:00 ngomhla ka-Jun 26.
Siyakwamukela ku-Gibson's Warehouse No. 2 - Indawo yokugcina impahla esanda kulungiswa, yesimanje edolobheni lase-Staunton, VA. Lesi sakhiwo esiyingqopha-mlando saklanywa ngo-1905, ngumdwebi wamapulani owaziwayo, u-T.J. Collins. Indawo imaphakathi, iphephile futhi igcwele izindawo zokudlela, izitolo ezihlukile, izindawo zokuphuza utshwala, indawo eluhlaza kanye nanoma yini enye inhliziyo yakho eyifisayo.
I-Gibson's Warehouse isenkabeni yeSifunda sase-Wharf sedolobha i-Staunton, ibanga nje eliqhele ngezindawo zokudlela, izitolo zekhofi, ukuyothenga kanye nokuphila kwasebusuku. Indawo yashiswa futhi yalungiswa ngokugcwele ngoSepthemba 2018 futhi ihlonipha ukusetshenziswa kwasekuqaleni kwesakhiwo, isitolo sokudla/indlu yokugcina izinto enazo zonke izinsiza zesimanje ongase uthembele kuzo.
Ikhishi elisha linosayizi ogcwele, izinto zikagesi zensimbi engagqwali, okuhlanganisa isiqandisi, isitofu, i-microwave, umshini wokugeza izitsha nohhavini, izinto zokubala zegranite, izinto zasekhishini nezitsha, kanye nomenzi wekhofi wase-Keurig ogcwele ama-pods ekhofi, okokhilimu noshukela ukuze uqinisekise ukuhlala kwakho kuzwakala sengathi usekhaya. Ukukhanyisa ngaphansi kwekhabhinethi, i-backsplash ye-subway tile kanye namakhabethe amhlophe esimanje anezicabha ezithambile eziseduze namadrowa enza lesi sikhala esihle kakhulu sezivakashi ezihlala isikhashana nesikhathi eside. Izihlalo ezingaphezulu ezinezitulo zesimanje zebha ziyindawo ekahle yokujabulela ukudla kwakho noma isidlo esisheshayo esisuka kubhasikidi wethu wesnack ogcwele ngokugcwele. Khetha ezinhlobonhlobo zama-crackers athokomele, ama-granola bar, ama-popcorn, amakhukhi nokuningi!
Umbhede omusha ongusayizi wenkosi unomatilasi omusha wegwebu onezingqimba ezi-3. Isendlalelo 1 siyisendlalelo sokunethezeka esino-2" wegwebu eliphendulayo elilala lipholile, nokugona nokugxusha. Isendlalelo sesi-2 siyisendlalelo sokutakula esino-2" wegwebu lenkumbulo ukuze uvuselele ingcindezi kanye ne-contour emzimbeni wakho. Isendlalelo sesi-3 siyisendlalelo esinegwebu eliwumgogodla elingu-6" eliminyene elisekela zonke izinhlobo zomzimba nezindawo zokulala. Kuhlanganiswe ne-headboard embozwe ngesikhumba, amalineni aphambili, anemicu ephezulu, cishe uzolala ubusuku obuhle kakhulu owake wawabona. ubenakho! Nethezeka embhedeni futhi ubukele izinhlelo zakho eziyintandokazi noma imicimbi yezemidlalo ku-smart TV engu-50" entsha.
Igumbi lokugezela elibanzi, elizimele linezindawo zokubala zequartz, ishawa enamathayela enendawo evalekile yengilazi yesimanje, ishampoo yekhwalithi yesalon nesipholile kanye nokugeza umzimba kwekhwalithi ye-spa. Amathawula ayi-plush, isomisi sezinwele sekhwalithi yesalon kanye namadrowa angaphansi kukasinki aqeda umuzwa wesimanjemanje, oduduzayo.
Indawo yokuhlala inezihlalo ezimbili ezikhululekile, i-ottoman yesikhumba kanye ne-smart TV entsha engu-50". Finyelela kalula i-Netflix, i-Amazon Prime namanye amasayithi okusakaza-bukhoma amaningi ngokungena kwakho siqu ukuze ungaphuthelwa izinhlelo zakho ozithandayo!
I-Wi-Fi yamahhala yesivinini esikhulu kanye nedeski lepayipi elenziwe ngokwezifiso elinengaphezulu lengilazi lenza kube lula ukuthola noma yimuphi umsebenzi odinga ukuwenza ngesikhathi uhlala.
Ngaphezu kokuqanjwa ngelinye lamadolobha “Ezintaba Eziyintandokazi ZaseMelika” nge-Travel + Leisure, uStaunton wenze uhlu lwe-Smithsonian.com njengelinye “Lamadolobha Amancane Angcono Kakhulu angama-20 eMelika”, elingelinye “leMigwaqo Eyi-10 Ephezulu Eyi-Idyllic Nomlando Ewumlando Kuwo wonke. i-USA" yi-USA Today kanye nenye ye "America's Best Main Streets" kaFodor's.
Nakuba iyidolobha elincane, iStaunton ayinakho ukushoda kwezinto okufanele izenze. Kungakhathaliseki ukuthi wanelisekile ngokufunda izitolo zasendaweni, izindawo zokudlela kanye namagalari edolobheni noma ufuna uhambo oluhlukile, kukhona okuthile kwawo wonke umuntu!
Abathandi bangaphandle bazojabulela indawo ebanzi ehlinzekwa yi-Blue Ridge Mountains. Ziningi izindlela zokuqwala izintaba, kusukela kwabaqalayo kuya ebunzimeni bezinga lochwepheshe, eduze kweBlue Ridge Parkway kanye ne-Skyline Drive kanye nangaphakathi kwemingcele yaseStunton City. Uma ukugibela izintaba, ukuhamba ngebhayisikili nokugijima kuyinto yakho, i-Betsy Bell Wilderness park iyintandokazi yendawo.
Abashisekeli bezobuciko bazokujabulela ukudlala umdlalo e-American Shakespeare Center's Blackfriars Playhouse (okuwukuphela kokwakhiwa kabusha kwetiyetha yasendlini kaShakespeare emhlabeni), ukufunda enye yegalari yobuciko edolobheni, noma umculo obukhoma nemidlalo yedrama yazo zonke izinhlobo. e-Oak Grove Theatre.
Abathandi bomlando ngeke bazi ukuthi baqale kuphi! Ukuvakashela umtapo wolwazi kamongameli kanye nomnyuziyamu kaWoodrow Wilson kuyindawo enhle yokuqala, kulandelwa ukuvakashela i-Frontier Culture Museum yaseVirginia, umbukiso womlando ophilayo ogqamisa impilo yabafuduki bokuqala baseMelika. Ungahlola nenombolo yezinye izimyuziyamu nezingosi zomlando kulo lonke idolobha.
Abathandi bezitimela bazojabulela ukuvakashela Isiteshi Sedepho SaseStunton, esakhiwa ekuqaleni cishe ngo-1886, lesi siteshi sibone ingxenye yaso efanelekile yokucekela phansi iminyaka. Ngo-1989, indawo yesiteshi yalungiswa ngosizo lwe-Historic Staunton Foundation. Kuze kube namuhla, kuseyisiteshi se-Amtrak esisebenzayo.
IStaunton nayo inedumela lokudla kwasendaweni kanye nezindawo zokudlela! Ngeke ulambe ngezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela kusukela emalini yokugibela yendabuko ukuya ekudleni okuphefumulelwe ngabapheki abawine umklomelo. Kukhona okuthile okuthandayo.
Ingabe ufuna okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele? Thatha uhambo olulodwa lwe-Ghost Tours oluqondiswa yi-Staunton. Uhambo lwemizuzu engama-90, oluqondiswa ilambu lwe-Queen City luzojabulisa ngempela labo abathanda umlando oshisayo.
Sihlala eduze futhi sitholakala ezivakashini zethu noma nini lapho zinemibuzo noma zidinga usizo. Sizama ukuvikela ubumfihlo besivakashi sethu ngaso sonke isikhathi ukuze ukusebenzelana kwethu nawe kube kuningi noma kube kuncane ngendlela esifisa ngayo.
Sihlala eduze futhi sitholakala ezivakashini zethu noma nini lapho zinemibuzo noma zidinga usizo. Sizama ukuvikela ubumfihlo besivakashi sethu ngaso sonke isikhathi ukuze ukusebenz…